စတင်သောင်ပိုက် - တရုတ် Ningbo Sunplast ပိုက်
အကောင်းဆုံးလက္ကားစျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင်6လသို့မဟုတ် 11.8m အရှည်ရှိနိုင်တဲ့နှစ်ဦးစလုံးအဆုံးမှာအနားကွပ်, customrized သံမဏိကျောထောက်နောက်ခံကွင်းနှင့်အတူ welded ISO4427 စံစတင်သောင် / dn160-1200mm ထံမှသတ္တုတူးဖော်ရေးပိုက်, အရည်အသွေးမြင့်မား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတင်သောင်ပိုက်၏အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ !!!
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 0.5-6000
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်ပတ်ကို3× 40ft ကွန်တိန်နာ
ထွက်ခွာ၏ဆိပ်ကမ်း: Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: မျက်မှောက်မှာ T / T သို့မဟုတ်ဘယ်သို့ LC
Delivery အချိန်: အမိန့်များအရေအတွက်ပေါ် မူတည်. ။
စတင်သောင်ပိုက်စတင် (မြင့်သောသိပ်သည်းဆ polyethylene) ပစ္စည်းတို့ကဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်ရွှံ့၏သောင်များအတွက်ပင်လယ်သဲများသယ်ဆောင်ရန်အများအားဖြင့်ပင်လယ်ကိုအပေါ်ကိုအသုံးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစတင်သောင်ပိုက်သည်အဘယ်သူ၏နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းစတင်အနားကွပ် Adapter က & သံမဏိကျောထောက်နောက်ခံကွင်းနှင့်အတူ welded နေကြသည်မှာ "စတင်အနားကွပ်ပိုက်" အဖြစ်ထုတ်လုပ်သောနှင့် welded သိရသည်။
အဆိုပါစတင်သောင်ပိုက်ပိုက်အဆုံးမှာနှစ်ခုသံမဏိကျောထောက်နောက်ခံကွင်း၏မီသိန်းဆက်သွယ်မှုများအတွက်သော့ခလောက် / အခွံမာသီး / ချွတ်တက် screwing အသုံးပြုပုံစုဝေးသို့မဟုတ် dismountabled ခံရဖို့ကိုအလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
SUNPLAST စတင်သောင်ပိုက်များသောအားဖြင့် 5.8m သို့မဟုတ် 11.8m lenghts ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါပိုက်ကွဲပြားခြားနားသော SDR & ဒီဇိုင်းဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှုန်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနံရံအထူနှင့်အတူ dn160-1200mm ကနေထောက်ပံ့ပေးခံရနိုင်ပြီး, ထုံးစံလုပ်သံမဏိကျောထောက်နောက်ခံကွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
SDR / ဖိအား ratings SDR11-PN16, SDR13.6-PN12.5, SDR17-PN10, SDR21-PN8, SDR26-PN6
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်ကညာ PE100 ကုန်ကြမ်း
ပိုက်များအတွက်ရရှိနိုင်အရောင်များ Black ကသို့မဟုတ်အပြာ, ဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုများနှုန်းအဖြစ်
ပိုက်များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ ISO4427, AS / NZS4130, BS EN 12201
ရရှိနိုင်နမူနာ သေးငယ်တဲ့ပမာဏများအတွက်ရရှိနိုင်ပါဟုတ်ပါတယ်, နမူနာ
အဆိုပါပိုက်အရှည်နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းအနားကွပ်နှင့်အတူ welded, 5.8m သို့မဟုတ် 11.8m အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
MOQ Negotiable အ
ထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန် အမိန့်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်. ။
တစ်ဦး 40ft ကွန်တိန်နာများအတွက် 20ft ကွန်တိန်နာများအတွက်အကြောင်း 10 ရက်, 15-20 ရက်အတွင်း
အာမခံအချိန် သုံးပြီးပုံမှန်များအတွက်3နှစ်
ငွေပေးချေမှုရမည့်သက်တမ်း မျက်မှောက်အချိန်တွင် T / T သို့မဟုတ် LC
FOB တင် port ကို Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်းတရုတ်
ဇာစ်မြစ်၏နေရာအရပ် Zhejiang, တရုတ်
SUNPLAST စတင်သောင်ပိုက် dn160mm ထံမှ 1200mm ပေးနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်များ:
SDR / ဖိအား
သာမန်ဖိအားခဲ့သည် Rating (MPA)
အောက်ပါအတိုင်းသောင်အလုပ်များအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်အဖြစ်, SUNPLAST စတင်သောင်ပိုက်အများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်
စုဝေးသို့မဟုတ် dismountabled မှ☑လြယ္ကူ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Excellent က☑နှင့်ခြစ်စွမ်းရည်မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ခုခံရေး, အနိမ့်သောမြို့ရိုးပွတ်တိုက်ကိန်း, အသေးစားစီးဆင်းမှုခုခံ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ conveying နိုင်စွမ်းဝတ်ဆင်☑Good။
: ယခင် စတင်ဓါတ်ငွေ့ပိုက်
နောက်တစ်ခု: Lowest Price for P235gh Equivalent Steel Pipe - SPA250-4M Manual Butt Fusion Welding Machine – SUNPLAST
Sunplast, 15 နှစျကျြော '' ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ယခုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရေရဆေိုး & ရေနုတ်မြောင်းအဘို့စတင်ပိုက် (Poly ပိုက်) ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံထဲသို့အများအပြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကတရုတ်ဖန်ဆင်းအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအခမဲ့ဖြစ်ပေးပါ။
2 Poly ပိုက်
300mm စတင် Pip အီး
စတင်သောင် Float ပိုက်
စတင် Poly ပိုက်
သိပ်သည်းဆမြင့် Polyethylene ပိုက်